Hita amin'ny Google Play | izao ny audiobooks Androidsis
Taorian'ny nanambarana volana vitsivitsy lasa izay dia lasa zava-misy izany. Audiobooks izao dia ao amin'ny Google Play amin'ny fomba ofisialy. Efa nanambara ny orinasa fa misy ao amin'ny fivarotana app izy ireo. Omaly lasa ofisialy ary ho afaka izay liana misintona karazana audiobook ao amin'ny Google Play.
Fotoana niandrasan'ny mpampiasa maro, satria efa am-bolana maro izy no nanambara ny fahatongavany. Soa ihany, satria omaly dia efa misy ny zava-misy. Ny Audiobooks dia misy ao amin'ny Play Store ankehitriny. Inona koa, Espana dia iray amin'ireo firenena efa misy azy ireo.
Firenena 45 sahady no efa nahazo ireo audiobooks ireo. Ny ankamaroan'ny firenena any Eropa dia tafiditra ao anaty lisitra. Amerika, Aostralia, Nouvelle Zélande ary firenena Aziatika sasany dia efa afaka mankafy azy ireo. Ary koa, izy rehetra dia efa misy amin'ny fiteny sivy samihafa. Anglisy, alemana, espaniola, frantsay, italianina, rosiana, koreana, japoney ary poloney no fiteny misy.
Afaka mahita azy ireo ao Google Play dia tsy mila mikaroka be loatra isika. Hatramin'ny vaovao fizarana manokana ho an'ny audiobooks ao amin'ny fivarotana. Amin'izany fomba izany, ny fidirana an'io fizarana io dia efa hitantsika ny fantina. Araka ny nomarihin'i Google, misy lohateny an'arivony maro azo avy amin'ny karazana isan-karazany. Ka misy boky ho an'ny rehetra.
Ankoatr'izay, tsy mila misoratra anarana amin'ny serivisy rehetra ianao. Voamarina ihany koa fa ho afaka amin'ny vidiny mirary ireo boky ireo., ka tsy isalasalana fa misy mpampiasa afaka miditra aminy. Hatao ho an'ny roa izy ireo Ireo mpampiasa Android toa ny iOS. Ary raha manana Google Assistant ianao dia azonao atao ny mangataka azy hamaky ilay boky aminao.
Rehefa avy niandry amam-bolana dia efa lasa zava-misy. Azo ampiasaina ao amin'ny Google Play izao ny audiobooks. Fotoana niandrasan'ny maro ary mety hampiakarana ny tolotra vokatra atolotry ny magazay malaza anay. Ahoana ny hevitrao momba ny zava-baovao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Audiobooks tonga amin'ny fomba ofisialy ao amin'ny Google Play
Ireo no telefaona Honor izay havaozina amin'ny EMUI 8